छायाँमा टरिगाउँ विमानस्थल - Pradesh Today
Homebreaking-newsछायाँमा टरिगाउँ विमानस्थल
तुलसीपुर, १८ जेठ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट घोषणा गरेको छ । बिहीबार प्रस्तुत बजेटले विगतमा जस्तै यस वर्षको बजेटले पनि दाङलाई निरास बनाएको छ ।
बजेटले तुलसीपुरमा रहेको टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारलाई यस वर्ष पनि समावेश गरेको छैन ।
सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद, मन्त्री, नेतालगायतको भूमिका कमजोर हुँदा दाङबासीहरूलाई यस वर्षको बजेटले ‘हात्ती आयो आयो फुस्सा’ बनाएको हो ।
दाङका ‘पावरफुलवाला’ नेताको इगोका कारणले टरिगाउँलाई छायाँमा पार्दै नयाँ विमानस्थलको योजना अघि सारेका छन् । यसमा बहालवाला मन्त्री र सांसदहरू समेत लाचार बनेको देखिन्छ ।
सरकारले टरिगाउँ विमानस्थलको व्यवस्थापनमा चासो नदिएर विमानस्थलको विकल्प खोजेको छ । जिल्लाको विकास र जनताको हितका लागि भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सामन्ती राजनीतिका कारण टरिगाउँ विमानस्थलको योजना छायाँमा परेको जनप्रतिनिधिकै धारणा आउन थालेका छन् ।
विमानस्थलको स्तरोन्नती र व्यवस्थापनका लागि स्थलगत अध्ययन, प्रतिवेदन प्रस्तुत, डेलिगेशन गरिदा पनि सरकारले यस विषयलाई बजेटमा नदेखाउनु एयरपोर्टलाई बन्द गराउने नियन देखिएको समेत प्रतिनिधिहरू बताउने गरेका छन् ।
विमानस्थलको उचित व्यवस्थापन, विस्तार र नियमित हवाईसेवाका सञ्चालन गर्न सरकारलाई दवावस्वरूप थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि भएका हुन् ।
कार्यक्रममा संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीलगायतले टरिगाउँ विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
तर सरकारले टरिगाउँ विमानस्थलको विकल्पमा नारायणपुर विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन एवं योजना प्रस्तुत गरेको छ । सबैको साझा अपेक्षा टरिगाउँ विमानस्थलमा नियमित हवाईसेवा र यसको उचित व्यवस्थापन भएपनि यसका लागि कुनै बजेट विनियोजन नहुँदा गर्दा स्थानीयहरूमा अन्यौलता छाएको छ ।
विमानस्थल विस्तारका विषयमा सरकारले दिँदै आएको आश्वासन किन ? कसरी ? र के का लागि ? एकाएक फेरियो भन्ने कुरा समेत बुझ्न सकिएको छैन ।
दाङका ‘पावरफुलवाला’ नेताको इगोका कारणले टरिगाउँलाई छायाँमा पार्दै नयाँ विमानस्थलको योजना ।
संकुचन सोंच र सामन्ती संस्कारसहितको गलत राजनीतिका कारण दाङ विकासको गतिबाट अगाडि बढ्न नसकेको ।
कुनैपनि हालतमा नारायणपुरमा तत्काल एयरपोर्ट स्थापना हुन नसक्ने ।
सरकारको नेतृत्व गरेर गएकाहरू स्वयम् आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको भन्न थालेपछि टरिगाउँ विमानस्थलको विषयलाई लिएर दाङबासीहरू थप आक्रोसित बनेका छन् ।
दाङ क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले जिल्लाको नेतृत्व गरेर सरकारमा पुगेकाहरूको कमजोरीकै कारण टरिगाउँ विमानस्थलको विकल्प तय भएको बताए ।
संकुचन सोंच र समान्ती संस्कारसहितको गलत राजनीतिका कारण दाङ विकासको गतिबाट अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा दाङका योजनाहरू छनोट हुने र बजेटले स्थान पाउने भएपनि शक्ति र पहुँचका आधारमा टरिगाउँ एयरपोर्टको विकल्प तयार पारिएको उनको आरोप छ ।
यो तरिकाले जिल्लाका कुनैपनि योजना र सफल राजनीति सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘यदि मुख्यमन्त्रीज्यूले टरिगाउँ विमान–स्थलको विस्तार चाहनुभएको भए सरकारले बजेटमा यसलाई समावेश गर्ने थियो’, उनले भने–
‘उहाँले अर्काे विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनालाई अगाडि ल्याउनुभएछ, टरिगाउँ विमानस्थललाई किन र के का लागि पछाडि पारियो मैले बुझ्नै सकेको छैन ?’
वि.सं २०११ सालदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थललाई पन्छ्याउँदा दाङको विकास ४० वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको व्यवस्थापनमा प्राविधिक र भौगोलिक समस्या छ भन्नु एकदमै गलत भएको उनले बताए ।
प्रविधिलाई आफू र आफ्नो क्षेत्र अनुकूल बनाउनुको सट्टा आफू प्रविधिमैत्री बन्न खोज्नु गलत भएको उनको तर्क छ । दुईवटा एयरपोर्टको विषयलाई लिएर दाङलाई विवादमा ल्याई अन्य जिल्लाले दाङलाई पछाडी पार्ने षड्यन्त्र रचेको हुनसक्ने उनको आशंका गरे ।
टरिगाउँ एयरपोर्टको विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरे पनि जिल्लाका सांसद तथा नेताहरू मिलेर यसको विकास र स्थानान्तरणका लागि लगानी लगाउने आश्वासन दिएका छन् ।
अबको एक वर्षमा ४२ सिटे हवाईजहाज सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनले दाङबासीहरूलाई हवाई सेवाबाट विक्षिप्त हुन नदिने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । उनले कुनैपनि हालतमा नारायणपुरमा तत्काल एयरपोर्ट स्थापना हुन नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
पटक–पटक टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तारको माग राखेर सरकार समक्ष छलफल गरेको भएपनि बजेट नछुट्याउँदा स्थानीयबासीमा निरास छाएको राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले बताइन् ।
आफ्नो एकमात्र माग टरिगाउँ विमानस्थल भएपनि यस वर्षले टरिगाउँ विमानस्थललाई स्थान नदिदा आफूलाई चित्त दुखेको उनको गुनासो छ ।
‘म आफैले कयौँपटक संसद र पर्यटन मन्त्रालयमा पनि एयरपोर्टका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ, नियमित हवाई सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दै आएको थिए’, उनले भनिन्– ‘तर बजेट प्रस्तुत गर्दा यसलाई कहिँकतै समावेश नगरेको देख्दा ठूला नेताको छायाँमा परेको महसुस भएको छ ।
सरकारले यस विषयमा चासो नदिदा अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीलाई किन यस्तो भयो ? खोई टरिगाउँ एयरपोर्टको लागि बजेट ? भनेर प्रश्नको जवाफ मागेको उनको भनाइ छ ।
विकल्पको रूपमा नारायणपुर विमानस्थलको लागि योजना छुट्याएको भएपनि कति र के का लागि ? भन्ने कुरा अझै स्पष्ट नभएको उनले बताइन् ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रदेश नं ५ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले विमानस्थलको विकल्प खोज्नु भनेको सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भएको विमानस्थलका लागि बजेट नछुट्याई अर्को विमानस्थलका लागि योजना ल्याउनु भनेको सरकारको काम नगर्ने नियत भएको दाबी गरे ।
‘सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट विनियोजनमा दाङका जनतालाई घात गर्दै आएको छ’, उनले भने– यस वर्षपनि दाङको हितमा बजेट छैन यसप्रति मेरो आपत्ति छ ।’
सरकारले पटक–पटक दाङका विकासमा सकारात्मक छौँ भन्दै दाङ र दाङबासीहरूलाई गलत आश्वासन मात्र दिने गरेको चौधरीले बताए ।
विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि सरकारमा जसरी छलफल भए अनुसारको बजेट दाङले नपाउँदा स्थानीय सरकार स्वयम् अन्यौलमा परेको तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका नगप्रमुख घनश्याम पाण्डेको भनाई छ ।
पटक–पटक टरिगाउँ एयरपोर्ट विस्तार गर्ने भन्दै मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभासद लगायतलाई दाङ ल्याई निरिक्षण, सर्वेक्षण गर्न लगाएको उनले बताए । तर विमानस्थलको विकल्पमा नारायणपुरलाई योजना अगाडि ल्याउँदा स्थानीयबासी निरास भएका छन् ।
नारायणपुर विमानस्थलका लागि सरकारले योजना अगाडि ल्याएपनि तुलसीपुरमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहने उनले दाबी गरे ।
पहिले जुन तरिकाले सरकारमा कुरा गरिएको थियो सोहि हिसावले टरिगाउँ विमानस्थललाई अगाडी बढाइने बताए । ‘सरकारले नारायणपुर विमानस्थलका लागि योजना अगाडि ल्याएपनि यहाँको नियमित उडानलाई असर गर्दैन’, उनले भने–
‘यतातिर १२ सय मिटर जमिनलाई थप व्यवस्थापन गरेर ईन्धन डिपो र मध्यम उडानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ भएको विमानस्थललाई विस्तार गर्नुको सट्टा वैकल्पिक विमानस्थलको योजना अगाडी सारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरू भएको छ ।